कांग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई प्रशिक्षण « News of Nepal
काठमाडौं, (नेस) ।
नेपाली कांग्रेसले महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई दुईदिने प्रशिक्षण दिने भएको छ । केन्द्रीय नीति अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको आइतबार बसेको बैठकले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुका लागि सातवटै प्रदेशको १२ स्थानमा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रतिष्ठानका सचिव मुक्ति आचार्यका अुनसार प्रशिक्षण साउन १६ गतेदेखि सञ्चालन गरिने बैठकले निर्णय गरेको छ । उपसभापति एवं प्रतिष्ठानका प्रमुख विमलेन्द्र निधिको अध्यक्षतामा पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको बैठकले प्रतिष्ठानको आधार पाठ्यक्रम निर्माण गर्न डा. जगदीशचन्द्र पोखरेलको संयोजकत्वमा समितिसमेत गठन गरेको छ । यो समितिमा डा. आरजु राणा, हरिहर विरही, राजु नेपाल र प्रसिस महरा सदस्य रहनुभएको छ ।
बैठकले नेपाली कांग्रेसबाट विजयी गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षहरुको राष्ट्रिय प्रशिक्षण कार्यक्रम काठमाडौँमा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । तर, यसको मिति भने तोकिएको छैन । बैठकले तारानाथ दाहालको संयोजकत्वमा निर्देशिका निर्माण समिति गठन गरेको थियो । यो समितिको सदस्यहरुमा भद्रा पराजुली भण्डारी र रामजी कंग्रेन रहनुभएको छ ।
आइतबारको बैठकले स्रोत व्यवस्थापन समिति पनि गठन गरेको सचिव आचार्यले जानकारी दिनुभएको छ । खिलानाथ दाहालको संयोजकत्वमा गठित यो समितिमा सुभाष पोखरेल, डा. प्रभु बुढाथोकी, भद्रा पराजुली भण्डारी, कमला लामिछाने, भगिरथ पोद्दार र योगराज शर्मा कँडेल सदस्य छन् ।
बिहीवारदेखि देशभर अत्याधिक चिसो बढ्ने, वर्षासँगै हिमपातको सम्भावना
मैत्रीपूर्ण फुटबल खेलमा कर्मचारीले सांसदलाई हराए
नेपालको १३ वर्षे साग फुटबल इतिहासः
निजी विद्यालयलाई सामाजिक संस्थामा रूपान्तरण गरिँदै
राष्ट्रिय सभाको चुनाव माघ ७ गतेदेखि
नेपालको १३ वर्षे साग फुटबल इतिहासः..
राष्ट्रिय सभाको चुनाव माघ ७ गतेदेखि..
प्रदेश ३ सरकारको निर्णय : पदक बिजेता खेलाडीलाई नगद पुरस्कार
राम्रो कमान्डले टार्यो ठूलो दुर्घटना
प्रदेश–३ सरकारद्वारा स्वर्ण विजेतालाई एक लाख
पाँच जनालाई क्याम्पस प्रवेशमा रोक
भक्तपुर र धुलिखेलमा चाईल्ड प्रोटेक्सन, रिकगनिशन एण्ड रेसपोन्स् तालिम
दुर्घटना न्यूनीकरणमा सरोकारवालाको प्रतिबद्धता
५ महिनामा ७ जबरजस्ती करणीका मुद्दा दर्ता